Nhau - Kushanda kwakachengeteka kweNC machining
1. Kushandisa kombiyuta simulation system
mazuva ano, nekuvandudzwa kwekombuta tekinoroji uye nekuenderera mberi kwekuwedzera kweNC machining kudzidzisa, kune akawanda uye akawanda NC machining simulation masisitimu, uye mabasa avo ari kuramba achiwedzera kukwana. Nokudaro, inogona kushandiswa kwekutanga kwekuongorora kutevedzana: cherechedza kufamba kwechishandiso kuti uone kana zvichibvira kudhumhana, uye shandisa kuenzanisa kwekuratidzira basa remuchina.
kazhinji yakawedzera graphic kuratidza basa reNC muchina chishandiso. Mushure mekuisa iyo inoteedzana, unogona kufonera iyo graphic simulation kuratidza basa kuti utarise nzira yekufamba yechishandiso zvakadzama, kuti utarise kana chishandiso chinogona kudhumhana neworkpiece kana fixture.
2. Shandisa basa rekuvhara remachining centre
general CNC muchina maturusi ane kukiya basa (yakazara kukiya kana imwechete axis kukiya). Kana kutevedzana kwapinda, kiya mbezo mbiri, uye tonga kana pachave nekudhumhana kuburikidza neukoshi hwekubatanidza hwematemo maviri. Iko kushandiswa kweichi basa kunofanirwa kudzivirira kushanda kwechishandiso chekuchinja, zvikasadaro haigone kupfuura mukutevedzana.
3. Shandisa iyo isina chinhu inomhanya basa remachining centre
iko kurongeka kwenzira yekushandisa inogona kuongororwa nekushandisa isina chinhu inomhanya basa reiyo machining centre. Kana chishandiso chemuchina chaiswa mukutevedzana, chishandiso kana workpiece inogona kuiswa, wobva wadzvanya bhatani risina chinhu. Panguva ino, iyo spindle haina kutenderera, uye iyo worktable inomhanya yega zvichienderana nenzira inoteedzana. Panguva ino, iwe unogona kuona kana chishandiso chinogona kudhumhana neworkpiece kana fixture. Nekudaro, mune iyi kesi, zvinodikanwa kuve nechokwadi kuti kana iyo workpiece yakaiswa, Iyo chishandiso haigone kutakurwa; Paunenge uchiisa chishandiso, workpiece haigone kuiswa, kana zvisina kudaro kudhumhana kuchaitika.
4. Coordinate system uye cutter muripo inofanira kuiswa nemazvo
kana uchitanga machining centre, ita shuwa yekuseta muchina wekushandisa referensi poindi. Iyo inoshanda yekubatanidza sisitimu yenzvimbo yekugadzira ichaenderana neR panguva yechirongwa, kunyanya mu7-axis direction. Kana Wu ikakanganisa, mukana wekudhumhana pakati pechigayo chekucheka uye workpiece yakakura kwazvo. Pamusoro pezvo, kuseta kweJ mudziyo kureba muripo unofanirwa kuve wakarurama. Zvikasadaro, ingave isina chinhu machining kana kudhumhana